Offshore Trust - Makomborero, Asset Kudzivirira, Maitirwo & Kuitwa
Offshore Trust yeAsset Protection
Nyanzvi dzakawanda dzokudzivirira pfuma dzinobvumirana nazvo offshore trust muhurumende yakasarudzwa yakarongeka iyo yakasimba yepamusoro yekuchengetedza motokari pasi rose. The Zvitsuwa Kuku Chivimbo chakaratidza kupa vimbiso yakasimba yekuchengetedza nyaya yemutemo. Ndiyo best jurisdiction yekudzivirirwa kwezvinhu mumaonero edu. Ngatitii dare remunharaunda rinoda kubhadharwa. Ramba uchifunga, iyo kambani yekuvimba muCook Islands, iri kunze kwenzvimbo yako yedare redzimhosva. Naizvozvo, mutirastii (uyo anowanzoita kambani yedu yemutemo yekumahombekombe) haasungirwe kutevedzera mutemo wedare. Nekuda kweizvozvo, iyo chiremera, kusungwa, inshuwarisi 30 + gore rekare Trust company kuchengetedza zvinhu zvako kunze kwekukuvadza. Kune vateereri rugare-of-mind we isu tinovaka kune imwe nyika yekodzero yemakambani (LLC) iyo 100% ine ye trust. The mutengi ndiye mutungamiriri we LLC.
The nhoroondo dzinowanikwa muI LLC mune imwe nyika yakachengeteka bhengi. Mutengi ndiye anasaina pamakaundi ese ebhengi. Kana izvo "zvakaipa" zvichiitika uye zvinhu zvikagona kutorwa nematare. Saka, trustee inogona kupindamo semaneja weSoftware. Ndokunge, ivo vanoita izvo iwe wakabhadhara iyo trust kambani kuti iite - chengetedza zvinhu zvako. Kamwe kutyisidzira kwepamutemo kukapfuura, mutengi anodzoreredzwa semaneja weStandard pamwe neizvo zvinhu zvichiripo. Tsvagurudzo yedu yakaratidza kuti yakagadzirirwa yakanyatsogadzirirwa Cook Islands kuvimba yakachengetedza vatengi zviwanikwa kubva pamutemo yese yekunetseka.
Offshore Trust vs. Chinyakare Kuvimba
An offshore trust yakanyanya kufanana nechitendero chetsika. Nekudaro, inosanganisira hukama kana kurongeka pakati pemapato anotevera: "Vanozvitonga (ma)," "Settlor (s)," uye "Anowana (mae)." Zvirongwa zvinoitwa mugwaro rinosunga, rakanyorwa zviri pamutemo. Tinochidaidza kuti "Vimbiso Yekuita." Ichi chishandiso chepamutemo chinogona kubata zita rezvinhu nepfuma. Iyo inogona kubata zvataurwa zvinhu zvichienderana nechivimbiso chetiit. Uyezve, inogona kupa zvakatevedzana mabhenefiti uye kugovera kune munhu kana boka revanhu. Vimbai anokanganisa vanhu ava sevanozobatsirwa. Heano mutsauko. Ngatitii mutongi mune imwe nzvimbo anoda kuti mari idzorerwe. Neraki kwauri iwe, trustee (hofisi yedu yemutemo yekumahombekombe) mudunhu rekunze haisungirwe kutevedzera.
Iyo trustee uye / kana iyo kambani yekuvimba inopihwa manejimendi ekuvimbika. Ivo vakasungwa nebasa rekufungidzira kusimudzira chibvumirano. Nekusaina gwaro ivo vanobvuma kune iyo mitemo uye izvo zvinodiwa zvakatemwa nedare trust. Kuvimba hakuna kufanana nesangano kana hwaro. Rudzi rwekuvimba chibvumirano chakanyorwa. Iyo inotaura kuti iyo trastii ndeye kupa vatsigiri uye kuchengetedza zvinhu kubva kune zvikara.
Kufunga kuumba Offshore Asset Dziviriro Trust
Kutanga, iyo inogadzirisa yaita sarudzo yekuumba kuvimba. Zvadaro, iyo inogadzirisa inofanirwa kusarudza fomu yekuvimba yaanoda kuumba. Izvi zvinosanganisira nguva yavo, inogona kuve isingagumi. Iyo inogadzirisa icha zvakare (nerubatsiro rwedu) kuita zvisarudzo zvakakosha pakutsanangura zvinhu. Aya maratidziro anosanganisira kusarudza kuti kuvimba kwacho kuchadzoreredzwa here kana kuti kwete. Izvi zvinosanganisira kana kuvimba kwacho kuchisarudzika kana kuti kwete. Uyezve, ichatsanangura kodzero, mabasa, zvisungo, uye zvinotarisirwa zvetrasti.
Iye zvino ngatitarisei pfungwa inogona kudzoreredzwa kana kuti isingachinjiki. Zvakawanda sekudanwa kwavo nemazita avo, kuvimba kwakadzoreredza kunogona kubviswa chero nguva nematemu eizvi anotsanangurwa nedareta. Neimwe nzira, ivo vanogona kuve nehupenyu hwakatemerwa hupenyu (kana vanogona kugara nekusingaperi) vasina marongero ekudzosera. Ndokunge, zvinogona kana kuti kusazopedzisira zvinoenderana nemamiriro ezvisikwa zvawo sezvakatsanangurwa muchiitiko chekuvimbika.
Kusiyana neizvi, kuvimba kwakasununguka kunogona kuwira pasi pechimwe chikamu, uye kunotsanangurwa sekuvimbika kwakawanda-kwakavakirwa mukuwirirana nemabatiro anoita materu mukugovera vanowana rubatsiro, uye anotopa, mune dzimwe nguva, trustee ine kodzero yekugadza kana wedzera vanobatsirwa. Izvi zvinorega simba rakawanda pamusoro pe offshore trust kune trustee, zvakadaro, uye inosimudzira kukosha kwekusarudzika kwekuchenjera kwemutungamiriri anokwanisa, ane mukurumbira mushe kana trust akabata kambani ine mareferenzi akanaka, mukurumbira wakakodzera, uye chiitiko chakakosha kuti ubudirire uye nokutendeka kuzadzisa nekuremekedza mazwi ekuvimba. .
Makomborero eOxshore Trust
Kuiswa kwezvimwe zvinhu uye musoro wezvivako mukutendesa ndiko kunowanikwa chikamu chekuviga uye kuchengetedzwa kubva kune zvikwereti zvinotarisirwa zvekuvimbiswa kwemahombekombe zvakagadzirwa. Kunyange zvazvo mutemo wepamutemo unopfuurira kumatirastii, unofanirwa kuzadzisa zvikwereti zvinowanikwa mu trust. Chinangwa chekutendwa ndechekupa avo vanobhadhara, iyo iyo inogona kunge iri, uye inowanzo, iyo inobatanidzwa. Vaya vanobatsirwa, vane kodzero dzakasimba kwazvo nechekuremekedza zvinodiwa mukutendwa uye nharaunda dzakawanda dzinoziva kuti chinangwa ndechokupa zvibatsiro, sezvinotsanangurwa mubato rekutenda, kune avo vanobatsirwa uye vanotonga zvakanaka munharaunda yavo apo mibvunzo yekutungamirirwa kwet trust inomuka.
Nokuti idzi zvitendero zvekunze zvinowanikwa nguva dzose mumatare emitero kana masimba ekuchengetedza mararamiro ne mukurumbira wekuchengetedzwa kwezvinhu uye zvakavanzika zvakavanzika, nzvimbo yekutenderera kune dzimwe nyika inobatsirawo kubva kune izvi. Assets dzinogadzirirwa mukati mekutenderera kwemahombekombe ndeyezvikamu zvizhinji kusununguka kubva pane dzimwe nguva zvinotambudza mutoro wemitemo inoshandiswa munyika yekugara kana kuti kutonga. Kana chivimbo chikaumbwa kuronga kubatsira kweiye akaumba chivimbo uye / kana vakaroorana, vana kana dzimwe vagari venhaka dzekugara, somuenzaniso, nzvimbo yekutenda inogona kupa nzvimbo yekutandarira yakadzika nhaka. Kune vanhu veku US kuchengetedzeka kweasset kuchengetedzwa kuvimba hakuwanzo mutero. Izvi, hazviwedzere kana kuderedza mitero yako.
Zvakare, zvichibva pakuumbwa kwavo mumasitadhi ekuchengetedzwa kwezvinhu zvakachengetedzwa zvakachengeteka, zvivimbiso zvekune dzimwe nyika zvinopa kusachengetedzwa kwakavanzika, kuwedzera kukudzivirira kubva panjodzi dzekutongwa kwevanhu uye mhosva, uye kubva pane zvinhu zvakadai sokurambana kana bhizinesi kusagadzikana. Inoshandiswawo nevakawanda kudzivirirwa kwezvinhu mumamiriro ezvinhu epamba yemagariro ezvematongerwe enyika kana ezvematongerwo enyika Izvo zvakaoma zvikuru, kuponesa mumamiriro ezvinhu ekupomerwa kwechiremera chakaipa, kune imwe nhengo yekunze kuvhara kuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kune munharaunda dzakawanda.
Kwatingaita An Offshore Trust
Offshore trasti inowanzogadzirwa mune yakaderera-mutero kana asset yakachengetedzwa nzvimbo dzine mukurumbira yakaratidzirwa yekubudirira manejimendi nekuitwa kwetrasti uye trust mari. Nekudaro, hazvifanirwe hazvo kuve nenzvimbo yakakodzera kuve nzvimbo yemutero kana kuve nemirairo yakadzama-mazhinji emabvumirano ekuumbwa kwekutenda uye nyika dzinongopa mukurumbira, makambani ekuvimba akavimbika pamwe nekuvanzika kwakanyanya uye neakakura masheya eushe.
Imwe dhechi yakajairika ndeyekuti matunhu aya anovimba nemitemo yavo yekutenda uye zvakatemwa pamutemo weChirungu - izvi nekuti iro zano rekusimbisa kuvimba ipfungwa yechinyakare yeChirungu kubva panguva yeVakarwa. Dzimwe hutongi hweEuropean dzinopa hutongi hwakabudirira hutongi, seLuxembourg, Malta, Switzerland, nezvimwewo, vakagadzirisa zviga zvavo nemirairo kuti zvienderane nemhando dzakavimbika dzekutonga dzakagadziriswa nevaya vanobva pamutemo wechirungu. Idzimhosva dzinomira pamusoro pezvimwe zvose maererano nehurumende yekudzivirirwa ndeye Cook Islands, the Nevis kuvimba uye imwe muBelize, mune izvi.
Kuumbwa kwenzvimbo yekutengesa kune imwe nzvimbo kunoda kuongororwa kwezvinangwa uye chinangwa chekugadzirisa, uye inotora zvimwe zvigadziro pakugadzirisa nekugadzirisa. Nokudaro, kutsvaga kwakakomba, kwakaitwa, uye mazano uye rubatsiro kubva kune vane ruzivo uye vane ruzivo ruzivo.
Kugadzira nzvimbo yekutengesa kune dzimwe nzvimbo inopa kudzivirirwa kwakanyanya kwezvinhu kubva pakusatsvaga, kutongerwa, uye kukakavadzana kwevanhu. Izvo zvinofanira kunge zviri pachena kuti kunyange zvazvo mari yekugadzirisa nekugadzirisa inogona kuonekwa, kugadzirwa kwe offshore trust ichapa rugare rwakanaka rwepfungwa kune avo vanotarisira kuchengetedza zvinhu zvavo zvakanyanya kana kupa vana vavo munguva refu.